Fantaro Ilay Lehilahy Mpikambana Kongresy Te-Hahakristiana ny Aterineto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Mey 2015 3:31 GMT
Nampitahain'ny gazetiboky Breziliana iray amin'ilay Frank Underwood olona iray, makiavelika, ao amin'ny sarimihetsika House of Cards, fantatra amin'ny fanakaikezana ny sasany amin'ireo olo-malaza ara-pivavahana mampiady hevitra indrindra ao amin'ny firenena i Cunha, ary lasibatra maharitry ny hetsiky ny mpikatroky ny zo sivily sy ny LGBT noho ny fijeriny tafahoatra amin'ny fomba fijeriny araka nenti-paharazana mahasorena.
Nisongadina tamin'ny lohatenim-baovao indray i Cunha noho ny adihevitra hafa: tamin'ny volana Aprily, namoaka ny lisitry ny anaran-tranonkala 288 nosoratana amin'ny anarany ny habatranonkala Pastebin, ka momba an'i Jesoa Kristy ny 154 amin'izany.
Mba hihazonana ny anaran-tsehatra, toy ny jesusfacebook.com.br, gmailjesus, googlejesus, messengerjesus, youtubejesus sy ny jesusblackberry, mandany eo amin'ny 8,000 reals (eo amin'ny 2600 dolara Amerikana eo) isan-taona i Eduardo Cosetino da Cunha, araka ny filazan'ny gazety O Estado de São Paulo. *
Manana endrika ara-politika be dia be ny zotom-po ara-pivavahan'i Cunha. Anisan'ny ao anatin'ilay antsoina hoe Mandan'ny Parlementera Evanjelika: vondrona manambatra ireo mpikambana evanjelika ao amin'ny kongresy avy amin'ny antoko samihafa i Cunha, izay mamaritra ny tenany ao amin'ny Twitter ho “Evanjelika, mpahay toe-karena, mpiaro ny fiainana sy ny fianakaviana”.
Isa-kerinandro, mivory ao amin'ny iray amin'ny efitry ny lapan'ny kongresy ny Mandatehezana ry zareo hivavaka. Raràn'ny Lalàmpanorenana Breziliana, izay miantoka ny firenena laika izany fomba fanao izany, saingy nodinihana indray rehefa voafidy ho Filohan'ny Antenimieran'ny Solombavambahoaka tamin'ny volana Febroary teo i Cunha.
Mitsipaka ny fankatoavana ireo fomba fijery hafa momba ny zon'ny LGBT, ny fanalan-jaza na ny politikan'ny zava-mahadomelina ny Mandatehezana, ary niaro ny fampidinana ny taona mahatompon'andraikitra amin'ny heloka bevava ho 16 taona. Na dia teo aza izany toe-javatra mampiadihevitra izany, niakatra 14% ireo mpikambana ao amin'ny Mandatehezana taorian'ny fifidianana kongresy tamin'ny taon-dasa.
Nilaza ihany koa izy ireo fa natao hanakanana ny “cybersquatting” [fonenana an-tsokosoko ao amin'ny serasera] izany, izay araka ny Lalàna Amerikana dia midika ho “manoratra anarana, miditra an-tsokosoko na mampiasa anarana sehatra aterineto amin'ny fikasana ratsy haka tombontsoa amin'ny fikasana tsaran'ny anara-marika iray an’olon-kafa“.
Ao Brezila, mbola tsy voafidy ny lalàna entina misoroka izany fomba fanao izany hatramin'ny nanolorany azy voalohany tamin'ny 2011. Hiditra amin'ny fandràrana ny tetikasa natolotry ny solombavambahoaka Claudio Cajado :
Nitanisa fanehoan-kevitra nataon'ireo fampahalalam-baovao hafa tamin'izany fotoana izany ny El País:
Nahitana fiakarana 61% ny isan'ireo mpivavaka evanjelika nandritra ny folo taona farany araka ny hita tamin'ny fanisam-bahoaka farany . Araka fitsapan-kevitra tamin'ny 2013 nataon'ny Datafolha, ivon-toeram-pikarohana iray, dia evanjelika avokoa ankehitriny ny 28%n'ny Breziliana.
Toa mahay mamaky izany tranga izany tsara kokoa noho ny maro hafa i Eduardo Cunha. Fotoana fohy talohan'ny naha-voafidy azy hitarika ny antenimieran'ny solombavambahoaka, nanomboka nanalavitra ny tenany tamin'ny fiangonana evanjelika iray, Sara Nossa Terra (Sitrano ny taninay), izay nahampikambana azy nandritra ny 20 taona izy ary nanomboka hita tamin'ny fotoam-pivavahan'ny Assembleia de Deus, [Fiangonan’ Andriamanitra] iray amin'ireo anaram-piangonana evanjelika taloha indrindra sy iray amin'ireo manana mpanatrika betsaka indrindra ao Brezila. Ireo fiangonana roa ireo dia samy tantanin'ireo mpitarika manana fahefana goavana amin'ireo tsongoin'olom-bolo ara-politika ao amin'ny firenena.
Nahazo ity tarehimarika ity ny gazety O Estado de São Paulo tamin'ny alalan'ny Registro.com, fikambanana tompon'andraikitra amin'ny fandraketana anaran-tsehatra habaka ao Brezila.